Rieslọ ọrụ & Ihe / Ngwa
Food & onunu
Mmanụ & Gas / Ngwuputa
Lọ ọgwụ / fatịlaịza
Industrial Usoro jụrụ / Ntụ oyi
Cross Flow Evaporative Condenser - SPL-S usoro
Emechiri Circuit Cooling Tower
Emechiela Loop Cooling Tower - Cross Flow
Emechiri Emechi Cooling Tower - Flow Counter
Steel Open Loop Jụrụ Tower
D1, D2 Arụ Mgbu
Nchekwa Akpụkpọ Ahụ Ice
Onye Anyị Bụ?
Gịnị Ka Anyị Na-eme?
Ntak emi Họrọ Anyị?
Anyị Team & Omenala
Ọrụ & Nkwado
Ajụjụ / nbudata
Kpọtụrụ / qudị Ajụjụ
Evaporative Condenser - Counter Flow
Evaporative Condenser - Cross Flow
Next Generation oyi na-enye uru nke Evaporative & Dry Cooling in a single machine. Enwere ike wepụta Sensible Heat site na mmiri dị elu dị elu Akọrọ akọrọ na Latent Heat nwere ike wepụ site na Wet Nkebi dị n'okpuru, na-ebute usoro arụmọrụ dị elu na nchekwa nchekwa.
SPL ngwaahịa atụmatụ
Na-azoputa mmiri 70%, 25% obere mmezi, 70% nchekwa igwe.
Material Ngwongwo na-eguzogide corrosion na teknụzụ nke oge a chọrọ naanị nyocha oge.
Jikọtara usoro ikuku na ụzọ mmiri na-ebelata ọnụ ọgụgụ na-ewuli elu ma hụ na arụmọrụ dị elu dị elu.
Access Nnweta dị mfe na-ebelata mmezi na ụgwọ ọrụ.
SPL ngwaahịa ngwaahịa
•Ihe owuwu: Panels na Coil dị na kpaliri, SS 304, SS 316, SS 316L.
•Mbughari mbugharị (nhọrọ): Iji nweta ngwa igwe na ihe dị n'ime maka nhicha.
•Circulating Pump: Siemens / WEG Motor, Siri ike na-agba ọsọ, obere mkpọtụ, Nnukwu ikike ma obere ike.
Pọrụ mmiri nke Ọrụ: Mmiri na-ekpo ọkụ na-abanye n'ime eriri igwe na ngalaba dị elu ma na-ekpochapụ ọkụ ya nwere ezi uche na ikuku Ambient. Mmiri a na-eme ka mmiri dị mma tupu ya abanye na eriri mmiri na ngalaba dị n'okpuru. Ikuku Ikuku na mmiri Spray na-amịpụta Sensible na Latent okpomọkụ site na usoro mmiri mmiri ma na-agbasa na ikuku.
Mmiri mmiri dị jụụ wee laghachi na usoro ahụ.
A na-anakọta mmiri na-agba agba n'ime efere agbakwunyere n'okpuru, wee gụghachi ya site na enyemaka nke mgbapụta azụ n'akụkụ ngalaba eriri mmiri, a na-agbapụ Ikuku Ikuku na vide Axial fans na mbara igwe.
•Ike •Industrylọ Ọrụ Chemical
•Ebe nchekwa data •Imeputa
Nke gara aga: Igwe oyi
Osote: Evaporative Condenser - Counter Flow
Adreesị: Nke 458 Gongye Road Baoshan District Shanghai, 200444, China
Ekwentị: kpọọ anyị ugbu a: + 86-21-36160669
Gịnị kpatara nchekwa ice?
Gịnị kpatara nchekwa ice? Usoro Nchekwa Ice na-eji ice eme ihe maka nchekwa ike ọkụ. N'abalị, sistemụ ahụ na-ewepụta ice iji chekwaa jụrụ oyi, ma n'ehihie ha na-agbapụta jụrụ oyi iji zute oke ọkụ eletrik chọrọ. Ice agu ...
Obere Ndụmọdụ na SPL Evaporative Condens
Arụla ọrụ ọ bụla na ma ọ bụ n'akụkụ ndị agbapụ, motọ, ma ọ bụ draịva ma ọ bụ n'ime ngalaba na-ebughi ụzọ hụ na akwụpụrụ ndị Fans na nfuli, kpọchie ha, ma pịa ha. Lelee iji hụ na onye ofufe moto biarin ...
Ndị na-emepụta Refrigerant Ga-enwe Mgbanwe
Gao Jin, Director General nke Ngalaba Mgbanwe Ihu Igwe, kwuru na ugbu a, ikike ikuku carbon nke na-ejikọkarị maka carbon dioxide. Nzọụkwụ ọzọ bụ imechikwa njikwa na HFCs, ma jiri nwayọọ nwayọọ wepụ ...
A na-eme ka condenser nke evaporative dị elu site na ụlọ elu dị jụụ. Operationkpụrụ ọrụ ya bụ otu ihe ahụ dị ka nke ụlọ elu jụrụ oyi. Ọ na-tumadi ekewet okpomọkụ Exchanger, mmiri mgbasa usoro na ofufe syste ...
Jikọọ Aka Iji Lụ Ọrịa Ọrịa
Na Machị 4, 2020, ụgbọ elu si Brazil rutere na nchekwa na Shanghai, na-ebu nkpuchi PFF2 20,000 nke Lianhe Chemical Technology Co., Ltd. Nyere na Taizhou Red Cross. Nke a bụ nke ise ogbe ...